Wiricheya Yevashandisi Yevatungamiriri Ekubata Yakanaka Mamiriro ekunze
Kunyangwe Arizona inogona kutonhorera uye kuita sinou pane dzimwe nguva iyo inogona kuve huru pati pooper yevanodziya mamiriro ekunze. Iwe haungade kuve kunze kune iyo mhando yemamiriro ekunze kana iwe usinga fanike kudaro; zvisinei isu tese tinofanirwa kuenda kunze pane imwe nguva, kunyangwe iwe uri wiricheya mushandisi.
Iwe uchiri kufanira kupfeka zvakakodzera kune inotonhora mamiriro ekunze; zvisinei iwe unozofanirwa kungwarira kupfuura zvakajairwa. Iwo matipi pazasi achabatsira wiricheya vashandisi kuburikidza nemamiriro ekunze anotonhora.
Usati waenda kunze kunotonhorera sunscreen, hongu kunyangwe munguva yechando uye pfeka muzvikamu. Kana iwe uri kubuda kunze mangwanani-ngwanani apo inowanzove inotonhora zvakanyanya, unogona kunge wakanyanya kupisa nenguva yemasikati uye uchafanirwa kutanga kubvisa matanda kubva. Ita shuwa kuti zvidimbu zviri nyore kubvisa uye kuisa kana zvichidikanwa zvakare.
Zvinhu zvekunyorova-zvekutsvaira sarudzo yakanaka yezvikamu zvemukati. Usaende nekotoni yezvikamu zvemukati nekuti zvinowanzo bata unyoro uye zvinogona kukonzera hypothermia. Rukoko rwako rwekunze rwakakosha kwazvo, saka sarudza jasi rakakodzera mamiriro ekunze.
Kutakura Yakawedzera Gloves
Nguva dzose takura mamwe magurovhosi kuitira kuti uve nepakaoma kana zvichidikanwa. Kana iwe uchida kushandisa minwe yako, shandisa mittens. Chengetedza musoro wako wakafukidzwa nguva dzese nekopu inodziya uye leggings inogona kuchengeta makumbo ako achidziya.
Zvinodziya zvebhutsu zvakare zvinobatsira kwazvo mukutonhora kwemamiriro ekunze. Ramba uine ziso padyo neminwe yako, kana iri kuchena, enda kune imwe nzvimbo inodziya sezvo chando chingaruma chingasave chiri kure. Kana iwe usingakwanise kusvika pane inodziya nzvimbo, unogona kuisa minwe yako pasi pehapwa dzako kuti udziyise.
Kutyaira yako wiricheya kana mota
Kana iwe uchigara munzvimbo inowana yakawanda chando, funga kuwana chando matai emota yako uye wiricheya. Nguva dzose chengetedza kit yekuchengetedza mukati memotokari yako, iyo inofanirwa kusanganisira mvura, chikafu, tochi, makenduru, marasha, gumbeze uye petroleum jelly yezvikamu zvechiso zvakafukurwa. Usakanganwa kuti mabhatiri anowanzo kurasikirwa nesimba mumhepo inotonhora inotonhora. Edza kuchengeta chero mabhatiri achidziya kunyanya nharembozha yako.
Kana iwe uchitsvaga yakakosha michina yekufamba-famba munguva yechando mamiriro, ita shuwa yekushanyira yako yemuno wiricheya mutengesi. Ivo vanogona kukubatsira iwe kusarudza iyo yechando michina iyo inonyanya kukodzera pane zvaunoda.